McCain: Fries French kacha mma chọrọ akụrụngwa kacha mma. Na anyị na-eme atụmatụ itolite ya na Russia - Potato System Magazine
Ike McCain Ọ bụ ụmụnna McCain na Canada tọrọ ntọala na 1957. Ndabere nke ọrụ ya bụ akwụkwọ akụkọ dị mfe - ezigbo azụmahịa na-amalite site na ụkpụrụ omume ziri ezi. Ụkpụrụ a na-anọgide na-abụ ụkpụrụ bụ isi nke Amụma Ịrụ Ọrụ nke Ụlọ Ọrụ, nke ụkpụrụ ya ghọworo nkebiokwu a: Dị Mma. Mee ihe ọma! (Bụrụ onye kacha mma, mee ihe ọma!).
N'agbanyeghị ụdị azụmahịa nke ọrụ ụlọ ọrụ ahụ, ụkpụrụ anọ bụ ihe kacha mkpa: nchekwa, nkwanye ùgwù, imeghe na ntụkwasị obi.
Ka ụbọchị, McCain bụ onye na-emepụta ngwaahịa nduku jụrụ oyi n'ụwa niile. Ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ 51 ma na-arụ ọrụ na mba 160.
Ike McCain nwere ahụmahụ 60 afọ na ụlọ ọrụ nduku, ma n'otu oge ahụ na-agbalịsi ike mgbe niile maka mmepe ma na-eche banyere ọdịnihu - na-eme nchọpụta ọhụrụ ụzọ ọrụ ugbo, na-arụ ọrụ iji chekwaa ala na ichekwa mmiri, na-eme ka nduku cultivation ihu igwe na-adịgide adịgide na ecology.
McCain na-arụkọ ọrụ ọnụ na ndị ọrụ ugbo ya na-enye poteto na osisi ụlọ ọrụ, n'ihi na mmepụta nke fries french na-amalite site na ubi nduku.
Onye ọrụ dị iche na-elekọta ụlọ ọrụ ugbo ọ bụla McCain. Ndị ọkachamara nke ụlọ ọrụ ahụ na-arụ nkwado zuru oke nke ọrụ ahụ ma nye ndụmọdụ iji mee ka mkpụrụ osisi dịkwuo elu, meziwanye àgwà poteto, yana ịbawanye ndụ ndụ nke ngwaahịa. Ụlọ ọrụ ahụ na ndị mmekọ ya na-arụ ọrụ ugbo na-ejikọta ọnụ site na otu ebumnuche - iji nweta poteto kacha mma, ebe ọ bụ na naanị site na ihe ndị dị otú ahụ ị nwere ike ime fries french kacha mma n'ụwa!
Na netwọk nke ndị mmekọ ugbo McCain gụnyere ihe karịrị 3500 ndị ọrụ ugbo na ụlọ ọrụ ugbo n'ụwa niile. Ụlọ ọrụ na-agbalịsi ike na-ewu ogologo oge mmekọrịta na ha - na America na Europe e nwere ugbo ezinụlọ nke cultivation nke akụrụngwa maka. McCain ekere òkè n'ọgbọ nke atọ nke ndị ọrụ ugbo.
McCain bụ azụmahịa ezinụlọ, na ndị mmekọ nke ụlọ ọrụ na-aghọ akụkụ nke nnukwu ezinụlọ a na-akọ ugbo. Ị chọrọ isonyere ya?
Na-arụ ọrụ na McCain, ị ga-enweta ohere dị iche iche nke ụlọ ọrụ ahụ, ihe ọmụma agronomic kachasị ọhụrụ; nweta ahụmịhe dị mkpa na nkwado nke ndị ọkachamara ị ga-enweta nsonaazụ dị mma.
N'ọdịnihu dị nso ụlọ ọrụ McCain na-ezube ime ka mmepụta ya na Russia gbasaa ma gbasaa mmekorita ya na ugbo na ụlọ ọrụ ugbo. Na Russia McCain na-anọchi anya: nkesa nkesa McCain Marketing (Rus) LLC, Agro Department of McCain Agriculture (Rus) LLC, yana McCain Foods Rus LLC, nke na-emejuputa atumatu a osisi na-ewu oru ngo na Tula mpaghara.
Nnọchite anya ụlọ ọrụ McCain na Russia
105082, Moscow, St. Malaya Pochtovaya, 12, ụlọ 1
Onye njikwa ịzụ ihe akụrụngwa Rinat Khantseverov: + 7 910 076 82 26
Ebe owuwu McCain
301637, Tula mpaghara, Uzlovsky district, Ogarevka obodo, Special Economic Mpaghara "Uzlovaya"
Tags: McCainFrench fires emepụtara
Molyanov Agro Group LLC: Anyị na-eto ụdị dị iche iche n'usoro ma na-enye nkwado agronomic